News baroor ah ... war xun oo xun Wargeysyada | Martech Zone
Isniin, Oktoobar 30, 2006 Axad, Sebtembar 30, 2012 Douglas Karr
Haddii qof i weydiiyo, waa inaan u sheegaa inaan weli u xiisay ka shaqeynta Warshadaha Warshadaha. Wax kasta oo ka soo baxa urta saxaafadda (waxaan bilaabay xirfadeyda wax soo saar) illaa iyo dhammaan xilliyada xiisaha badan iyo ilaha ugu yar. Dadka ka shaqeeya Wargeysyada waa dad si gaar ah u khaas ah… waa meherad ay shirkadaha si tartiib tartiib ah u jirdilaan una dilaan dhallintooda.
In kasta oo waqtiyada kama dambaysta ah, luminta wareegga, dhimista shaqaalaha, dib-u-ururinta, iyo in shirkaddaada laga iibiyo hoostaada, dadku way sii wadaan. Saxafiyiintu waa kuwa jecel, aaminaad leh, oo jecel inay nolosha wax ka beddelaan iyagoo adeegsanaya erayadooda. Waxaan u maleynayaa lahaanshaha wargeysyada ay shirkaddu ku nooshahay meel ka baxsan gobolka wargeyska inay ku yeelatay mid ka mid ah saameynta ugu weyn ee wiiqday warshadaha. Wax walba laga bilaabo wararka la isku daray ilaa luminta wargeysyada xambaara waxay ka dhigteen ganacsi aan shakhsiyan ahayn.
Isku day sidii ay kari lahaayeen, hoggaamiyeyaasha warshaduhu uma muuqan karaan inay dib u soo celinayaan qashin qashin ah mar labaad Waa warshad aan aaminsanahay inay ku fashilantay guuldarro. Dardar galinta dhimashadooda ayaa ah shuruuda joogtada ah ee ay u qabaan faa iidada weyn iyo tan weyn - tani waa xadayaa maalgashiyada ka caawin kara joornaalada in ay badbaadaan berri iyada oo loo marayo maalgashiyada internetka iyo fursadaha gobolka.
Qaar badan oo ka mid ah asxaabteyda wanaagsan wali wey ku jiraan ganacsiga waxaanan arkaa inay bilaabeyso inay ku xirtaan iyaga. Saacado badan, shaqo ka fadhiisis badan, wax u hurid tayo leh, iyo abaal marin la’aan.
Ma hubo waxa suurtagal ah in lagu mudayo warshadaha si ay u shaqeyso. Awoodda 'noqon doonta' kama tanaasulayso xukunka meheradda ama siyaasaddiisa cudurka ku dhacday. Dhibaatadu waxay tahay inay ku socon doonaan ukumo buul fiican markii markabkoodu hoos u dhaco. Nolosha aadka loo saameynayo waxay noqon doontaa dadka shaqadooda waayey iyo annaga, muwaadiniinta u baahan saxafiyiinta inay runta qotaan.
Haddii aad waligaa fursad u hesho inaad shaqaaleeysid qof khibrad u leh Wargeyska, ama IT-ga, Suuqgeynta, Saxafiga, ama xitaa koronto-yaqaan highly Aad baan kula talin lahaa. Joornaalka Ragga iyo Haweenku waa kuwo wax soo saar leh, oo aan naf hurnimo lahayn, isla markaana hawl kar ah oo aan waligood kaa niyad jabin doonin Waa wax laga xumaado in la arko warshaduhu sidan oo kale ayey u burburayaan.
Oktoobar 31, 2006 at 12:59 PM
Wax wanaagsan baad tidhi.
Inbadan waan heshiin kari waayey.
Nov 1, 2006 at 12: 42 AM
Maqal maqal !!!